Iintsuku ze-6 ezitshintshile ubomi bethu - ii-Geofumadas
Iintsuku ze-6 ezitshintshile ubomi bethu
NgoJuni, 2009 Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Izinsuku zokugqibela ziye zahluke kakhulu, zivela kwenye. Ngamnye uye wafumana ukunambitheka okuhlukeneyo, inceba yokuba inambitheka iphosiwe, ngelixa i-sweet itholakala enkqenkqeza kwabanye, kwezinye iyenzeka kwi-inverse. Konke, i-background flavor is gall, njenge Andiyena i-ideologist Nesi sihloko sam, ndithi le ntsuku ezintandathu zishiya isithuba kwiqela elingafanelekanga lokuba lingenamgaqo-nkqubo.
1 ngosuku. NgoLwesine thina simahla, republic lobunganga, bathi elizimeleyo, bengazi abantu abaninzi imvula encinane cartography, njengokuba xa sisithi uphi Togo ukukhumbula amahlwempu ibanga lesithandathu. Ndaya Emini ekhaya, kuba yayiyingozi ukuhamba phantsi ngesitrato, kwabonakala ngqiqweni ukucinga izinto ezingenzeka esixekweni lwesiqhelo ngoko, ukuba unako bakubize kulisiko ukuba sesichengeni esondelayo yexesha leemvula.
2 ngosuku. NgoLwesihlanu sasiba mnandi phambi koMbutho weMerika yaseMerika, apho intlanganiso yeBhunga eliPhephayo yamangaliswa yingozi ebhengezwe yi-ambassador kule ntlangano, yavuma ngokuqinisekileyo ukuba le nto yayibonakala ingahambi kakuhle. Ndinekrakra ekhaya, kungekho nto endiyenzayo, kunye nezingane esikolweni kwaye ndingathandi ukubhala ... kunzima ukunandipha iholide enyanzelekileyo, xa kungekho zicwangciso ezininzi kunye nento eninzi yokwenza eofisini, ndahamba ndibhalela umfuziselo womxholo.
3 ngosuku. NgoMgqibelo ndayichitha phambi isigodlo sikamongameli ukutya yokuthengisa amaqebengwana, ndaza ukubona yonke intshukumo ndandikhe OoSodolophu wothuka elizweni, zonke yavakala kumnandi kodwa ukoyika yintoni enokwenzeka ngemini elandelayo umdla. Satyelela umhlobo wam Buendia kwaye phakathi neziselo izihlabo wandixelela malunga nendlela Captain Haddock ngo "Le zenqu uya ezintathu". Kwaba kuhle ukuba uzakubanokujonga oko kwi Will Smith movie "zeePonti Ezisixhenxe" kwaye ndiphuphe ukuba kukho abantu abalungileyo kweli hlabathi, kuba ndandicinga ukuba bonke abantu kweli lizwe ukwenza oku kanye mzuzu.
4 ngosuku. NgeSonto ininzi yehlabathi yazi ukuba yintoni eyadluliselwayo, ukuba kusekho abantu abahlala kwi-barbarism, kwaye uHuzgo Chávez uthe uya kuhlasela eli hlanga ngaliphi na indleko. Sasingenayo i-intanethi, akukho magesi kagesi, akukho fowuni yombuso. Kwakungenakwenzeka ukuba ushiye indlu, ngaphandle kokuzalisa itanki lokupheka kwinqanaba elide kwaye uthenge ukutya okusemgangathweni kwivenkile, kwimeko nje. Kwawa njengaseMacondo, ibhuloho echithwe kwindawo esenyakatho kwaye ukususela ngaloo mini sasifake i-curfew kwi-9 yobusuku.
5 ngosuku. NgoMvulo siphila kwemini ezidubedube, abantu ezitalatweni kunye neentonga, amatye, ndandingakwazi nkqu ukuya evenkileni apho ndifuna ukuthenga ebhedini wamathambo, ngoko ukuba okwesihlandlo sokuqala Mvulo ixesha elide andizange ndiye emsebenzini, ngenxa nje akukho kwa funeka ahambe. I-Central American Integration System sica Uveze ukuba kwafuneka awavale kwimida yethu kurhwebo, kunye nendawo yam endiyithandayo ukutya walifaka into engavumelekanga, andazifumana on Facebook kunye uphawu ezifana nezo ndabona esikolweni sam kwibakala yesibini, akukhona inkumbulo kodwa enye yesibhozo seminyaka iyayi: "I-28 Popular Leagues kaFebhuwari".
6 ngosuku. NgoLwesibini, isihlwele esikhulu epakini, yaye xa declaiming entliziyweni yakho intle injongo yakhe, The weZizwe eziManyeneyo Ezimanyeneyo wathi uya kuzama ukuba angenelele eli lizwe, kuquka eUnited States yathi "koku- umxhasi wezenzo ". I wavuya ukubona angathabatheki sonke esi sihlwele, nangona wam neentlanzi yegolide umhlobo wenza omnye filosofadas yakhe emva wesithathu ron: "Kazi ukuba ndinikhululele amalungu emigulukudu abalishumi elinababini kunye tattoos ebunzi, abaninzi aba bantu bahlale endhawini" i 'umdla kodwa ndaqalisa ukucinga ukuba iinkokeli zethu kufuneka ixesha ukuqinisekisa lonke ihlabathi menso iiyure 72.
Ndingatsho ndithi, ukuthula enesithukuthezi Ndiye ndaqonda ukuba kubaluleke uxolo umnt ilizwe akukhange kube imfazwe eqhelekileyo yamakhaya, ukufikisa emva kwexesha thina, uthi umhlobo wam Buendia ukuba "akukho kodwa ngokuthula maj3s "U Ke kaloku lonke ihlabathi igwebela kwenzeka ntoni apha, nangona kufuneka kwikomkhulu ukuba enye kwizithuba ezimbini ezikhoyo kunye nokusebenza oomasipala basemaphandleni 35 ukwazi kanye oko bakucingayo emhlabeni. Ngokufutshane ke kwizithuba ezimbini ziphambili lula zilungelelanise yendawo lemizuzwana imizuzu: kuqala kwakukho kombuso, omnye ukulandelana siseko. Kungakhathaliseki ukuba kunjalo, bobabini bavusa loo ntlungu ngosuku emva kokulahleka kobuntombi.
Yiloo namanenekazi ubomi imincili, kwiintsuku ezintandathu etshintshe ubomi babantu abangaphezu kwezigidi 7 ndiya kuhamba ngayo iimvakalelo ezinjalo, kunye isixa ngamayelenqe kwizalamane nabahlobo amazwe oye nzima kum ukuchaza into kwenzekani apha Ndiyazi kuphela ukuba kulo siza kuba entle, yaye lonke ilizwe kufuneka sicinge iinguqu eziya kuphelela iimeko zokuphila ezingcono lokukhula; Sithemba nje ukuba akubuhlungu kwaye oko kwenzeka kanye kanye.
Kuza kwenzeka ntoni ngosuku 7, uya kuba nomdla njengoko 8 kunye eliseleyo kuloo nyaka de bafike kunyulo 28 Novemba, imeko yam cala xa ebhalela loo ndawo abaphulaphuli ngamazwe ngakumbi nakwabo abafuni ukubonisa uluvo lwam buqu, njengoko Ngexa ndithe ndathetha nomhlobo wam Macondo, ndiyaqonda ukuba unamaphiko amaninzi njengepiyano enkulu ebusheni bam; Akukhona nje kuphela kwezopolitiko, kodwa ezoqoqosho, ngokusemthethweni, ngoku i-geopolitical, sonke siyavuma ukuba intlalontle kwaye yintoni exhalabisa kakhulu, ingqiqo. Kuya kuba buhlungu ukuba yonke le ntshukumo yezinto ezingokwemvelo ayiyikuvelisa utshintsho olukhulu, kuba ngoko sinokuyixhatshazela iminyaka ye-20 njengoko kwenzeke kunye nabamelwane bethu abasondeleyo kwiindleko eziphezulu kunokuwa kweInternet okanye ikhefu kabini ngosuku.
Ukubulisa amaHondur, njengoko ubonayo, kungekhona kuphela xa iqela likazwelonke libetha iMexico (elingazihlandlo ezininzi), ukuthanda izwe kungabonakaliswa. Ukuba ungayibonisa ngentshiseko ngoku, yenza njalo, nje kuphela ukuba ingazilimazi inyaniso yabanye. Kuye wonke umhlaba, siyabonga ngemithandazo yakho.
Post edlulileyo«Edlulileyo Kwimeko yeHonduras, vumela ibali lithethe
Post Next Ukwazi ukuba bangaphi abantu abahambayoOkulandelayo "
Iimpendulo ze-6 "kwiintsuku ze-6 ezitshintshile ubomi bethu"
HLAWULA KWISICWANGCISO ESIKHONDURAS - 1 JULY 2009
Loo suku wawusoloko luzolile eTegucigalpa nakwelinye ilizwe. Imiboniso iyaqhubeka iqhutyelwa kwiindawo ezininzi zelizwe, zombini kunye nokuxoshwa kukaMongameli uZelaya. Iimbutho ezibaluleke kakhulu zenzeke namhlanje kwidolophu esemantla yaseCeyiba nakwidolophu yaseMzantsi Choluteca, zombini ekuxhaseni urhulumente kaMichelletti. Akukho ziganeko ezibalulekileyo ezichazwe.
Ubungqina obunokuthula malunga nabantu be-250 babanjwe ngalobu busuku phambi kweNdlu yeZizwe eziManyeneyo ukuba baqhankqalale malunga nesimo esithathwe yiNhlangano kwiimeko eziza kutshanje, zifuna ukuba intlangano ivelele amazwi abo kunye nenkxaso yentando yeninzi eHonduras.
UMnu Micheletti ukhethwe namhlanje ngabaPhathiswa abatsha, ukuzisa ikhabhinethi kwi90% yokugqiba. Abanye babo ngamalungu kaRhulumente kaMengameli uZelaya.
Inkundla Ephakamileyo of Justice wakhupha Imbalelwano ezizodwa (ezihlonyelwe) kubahlali esizwe kunye nawezizwe ngezizwe, sityikitywe ngabo bonke ABagwebi, apho Uchaza isizathu esisemthethweni amanyathelo athathwe yi ngamaziko yeejaji ngemihla kutshanje, Kuquka yokubulawa kokugxothwa Mongameli uZelaya. Umhlathi 8 of the Imbalelwano, kumazwe ingakumbi ukuba isigunyaziso sokuvalelwa ekhutshwe yiNkundla uMnuz Zelaya wahlala imfihlelo Kude kube ngoku.
Amaqhawe aPhathiswa aphinde akhupha i-note ye-press (i-annexed) apho iyalungisa khona izenzo zabo njengomgaqo-siseko.
UMkomishinala weSizwe wamaLungelo oluntu, oxhasa urhulumente omtsha, ucebise ukuba abe nombono wokubuza abantu baseHonduran ukuba bayavuma okanye bangabi ngokubuyiselwa kukaMongameli uZelaya. Isisombululo esinjalo, kubonakala kunjalo, akunakwenzeka kwimimiselo yomthetho nangokwenene.
Izibhengezo zikarhulumente ngamagosa athile karhulumente, ngokukodwa uMphathiswa oMiselweyo weMicimbi yeZangaphandle, ikhula ngokwetoni ngokumelene ne-OAS, i-UN kunye nokuphazamiseka kwamanye amazwe, kunye nokugxininisa ngakumbi kuMongameli Chavez waseVenezuela.
Amajelo aseburhulumenteni (i-radiyo, i-tv, amaphephandaba) ngokubanzi axhasa urhulumente omtsha kunye nentlangano yabashishini (COHEP) uye wakhupha inkcazo yenkxaso kulo. Amanye amaphephandaba (iziteshi zeTV kunye nezikhululo zomsakazo) ezazingena-Zelaya, nangona kunjalo, (iirediyo ezimbalwa zendawo kunye nomnye wesiteshi somnxeba welizwe ngokukhethekileyo) zihlala zivaliwe okanye zingeniswe ngokukhawuleza.
Izixhobo zokuhlambalaza zatshitshiswa izolo ebusuku kwizithuthi ezizimeleyo ezithintekayo kwizakhiwo zeNkundla ePhakamileyo kunye neGqwetha eliPhezulu, kungabikho na maxhoba.
I OAS General Assembly iphumeze isigqibo Le Morning Uyabagxeka mdibi d'AFP, uManuel Zelaya Ukuba Ukuqinisekisa Leyo ke uMongameli siseko ka Honduras kwaye ngokuyalela uNobhala Jikelele ukwenza Amalinge yokuZakuzelana ejolise ukubuyisela idemokhrasi kunye ulawulo lomthetho kunye nokubuyiselwa sikaMongameli Zelaya, esongela ukumisa ubulungu beHonduras ukuba ezi zinyathelo zibonakalise zingaphumeleli. I OAS Representative us axelelwe ukuba SG liya kutyelela Honduras kungekudala, Ehamba Abameli kwamanye amazwe (hayi Mongameli).
Ngokusekelwe ngasentla, uMongameli uZelaya (ngoku usePanama) uye wamemezela isigqibo sakhe sokuyeka ukubuyela kwakhe eHonduras kude kube ngoMgqibelo ozayo.
Iqela labaxhasi labaxhasi e-Honduras (G-16) ladibana namhlanje kwiZizwe eziManyeneyo ukuhlaziya imeko. ISpain, i-Italy kunye neFransi yazisa ukuba ii-ambassadors zabo zikhunjulwe ngokubonisana. IJamani yazisa ukuba ukuhamba kwe-ambassador yayo kuphela ngenxa yokuphela komsebenzi. I-IDB kunye ne-BCIE baye banqunyusa ukuhlawula; I-WB iimeko ezifanayo nangona ngezizathu zomthetho azinakusetyenziswa igama elithi "ukumiswa". Ezinye iinkqubo zentsebenziswano azange zenziwe ngokusemthethweni kodwa wonke umntu ufumene imiyalelo yokuphepha oonxibelelwano noorhulumente omtsha.
Abameli be-Honduran e-US kunye ne-EU kubonakala sengathi "batshintshe icala" njengoko bephikisana ukuba kuqhutywe iHonduras. UMongameli uZelaya uvakalise ukukhokelwa kwabo. Okwangoku, uMphathiswa kaMichelletti wezeMicimbi yangaphandle ukhumbula ii-ambassadors kwi-UN kunye ne-OAS. Yombini imibutho ichaze ngokucacileyo ukuba abayi kuqonda abanye abameli.
ICongress iphumeze uMmiselo osayinwe izolo nguMnu Micheletti, ngokobugcisa. I-187 yoMgaqo-siseko, ixesha elibekelwe ekhaya (ngoku ngu-10pm ukuya ku-5am) longezwa kwiintsuku ezi-3. Amalungelo aliqela anqunyanyiswe ngexesha leeyure, kubandakanya amalungelo nenkululeko yomntu, yokuhamba ngokukhululekileyo, yokuhlangana ngokukhululekileyo kunye nokudibana kwakhona, ukuthintelwa kokubanjwa ngokungqongqo. Oku kuvuse inkxalabo enkulu phakathi kwemibutho yoluntu neyamalungelo abantu kuba boyika ukuba oku kuyakwenza lula impindezelo yomkhosi kunye namapolisa ngokuchasene nabaxhasi bakaMnu Zelaya.
Iingxelo ezingaqinisekisiweyo ziyaqhubeka zijikeleza malunga nokuphathwa kakubi ngamapolisa kunye nemikhosi exhobileyo, ngakumbi kwimimandla yasemaphandleni, kuquka ukuboshwa ngokungabonakaliyo, ukubanjwa ngokunyanzeliswa kwabaselula, ukuvala iziteshi zomsakazo zendawo. Umququzeleli woMhlali we-UN uhlala eqhagamshelana ne-ofisi yesithili ye-High Commissioner yamaLungelo oluntu ukubika ngolu hlobo.
Iiofisi ze-UN zachithwa kule ntambama njengomlinganiselo wokuqapha, ngenxa yokubonisa okukhankanywe ngasentla.
ISigaba sesi-II siyaqhubeka sisebenza kweli lonke. I-UN iyaqhubeka isebenza nabasebenzi abalulekileyo kuphela.
Umninimzi waseHonduras: uChavez
Ngo-ÁLVARO VARGAS LLOSA
Ishicilelwe: Juni 30, 2009
KWIiveki ezikhokelela ekubambeni kweHonduras, uMongameli Manuel Zelaya,
unxulumane noHugo Chávez waseVenezuela, wayesazi into awayenzayo. Ngaphakathi
ukugxotha imida yentando yesininzi ngokuzama ukunyanzelisa umgaqo-siseko
utshintsho oluya kuvumela ukhetho lwakhe kwakhona, ndibekele umgibe
umkhosi. Umkhosi wawa ngenxa yawo, waba ngumongameli ongathandekiyo
wayesondele ekupheleni kwekota lakhe kwi-international cause célèbre.
Nangona i-coup coup has popular support in Honduras, ibuye ivumele
UMnu. Chávez, okhokela ukuphendula kwamanye amazwe, ukuba abize
umgangatho ophezulu wokuziphatha. Abaholi benkokheli, abazama ukukhusela uMnu.
UCávez ekungeniseni uHonduras kwinqanaba lakhe, unokuphela kokumnika
amandla amaninzi kummandla.
UMnu Chávez waphuma ngokukhawuleza ekuxhaseni uMnu. Zelaya. Ndi yingozi
Honduras ngezenzo zamkhosi kwaye waya eNicaragua, apho intlanganiso
yeBolivarian Alternative kwiMelika, i-Caracas-ekhokelwayo
ukusebenzisana okuzelwe njengenye indlela eya kwi-Intanethi ye-Free Trade Area
AmaMerika, kwakuyithuba eligqibeleleyo lokuthatha i-Latin
Umzamo wase-American pro-Zelaya.
UMbutho weMerika yaseMerika kamva wagweba ukukhutshwa (enye
Oorhulumente baseLatin waseMelika balandela i-suit) kunye nobhala walo jikelele
wagijima waya eNicaragua, apho kwadibana khona intlanganiso yesithili. Mnu.
UCávez wathumela indiza ukuba ibhabhise uMnu. Zelaya kuloo mhlangano,
ukummkela kwisikhululo se-Nicaragua, i-Managua.
Kuzo zonke iindaba zoLwimi lwaseSpain, umfanekiso ophindaphindiweyo
Kwiintsuku ezimbini zokugqibela ziye zenziwa nguMnu Chávez kunye nabalingani bakhe basebenzayo
ngokukhawuleza ngentando yenkululeko yaseHonduran. I-United States 'ilinganiswa
impendulo, kunye nesimo esiphantsi sengxelo esithathwe yi-South American
oorhulumente, baye balahleka phakathi komkhankaso ophezulu owenziwe ngu
Oku akusikho ukusekwa kweHonduras, ukothuswa nguMnu. Chávez
ithonya elikhulayo, elijoliswe xa lilahle uMnu. Zelaya. Kuyinto
Kwakhona iimeko ezintle zokubakhokela kwizinto ezilandelwayo
umongameli otyotshiwe. Ilungu le-Honduras lihlasele i-oligarchy, uMnu.
UZelaya weza kulawulo kwi-2006 njengenkokeli yePublic Liberal, a
lombutho-olufanelekileyo Wayeyimveliso yokusekwa: a
uyindlalifa kwinzuzo yentsapho
amashishini amahlathi, axhaswa kwiCentral America Free Trade Trade
Isivumelwano kunye neUnited States, kwaye wagijima waya kumongameli
iqonga elilondolozayo, elithembisa ukuba lukhuni kulwaphulo-mthetho kwaye luyakunqumla
Kuma-half half to his term, ke, uMnu. Zelaya wayebonakala
i-epiphany ye-ideological and became a admirer of Mr. Chávez. Ndi tyikitye
ukujongana nenkxaso-mali evulekile evela eVenezuela; kunyaka ophelileyo
zibandakanya iHonduras kwi-Bolivarian Alternative
BaseMerika. Kungekudala, amandla aye ekhanda lakhe.
Njengoko ukhetho lonyulo oluye lwaqhutywa ngoNovemba lwaqala ukunyuka, uMnu.
UZelaya wagqiba ekubeni abambe umvolivo kunye nenjongo yokugqibela yokuvumela
ukuba afune ukunyulwa kwakhona. Amanqaku aphulwayo ahambayo
Umgaqo-siseko owenzela utshintsho kumda womongameli womnye
Ixesha leminyaka emine kwaye kusetyenziswe inkqubo yomthetho yomgaqo-siseko
izilungiso Inkundla yokhetho, iNkundla ePhakamileyo, igqwetha
Jikelele, iCongress kunye namalungu eqela lakhe bamemezela uMnu. Zelaya
ngenjongo engekho mthethweni. Emva koko, ngeCawa, umkhosi wangena.
Isisombululo esifanelekileyo siya kuba nguMnu. Zelaya ukubuyela emagunyeni kunye
ushiye iofisi ezayo kunyaka, xa umceli wakhe ethatha. Nangona kunjalo, kunjalo
Ngokungathandabuzekiyo ukuba iinkokeli zokukhupha ziya kubuya. Kwakhona akunakwenzeka
Okokuba, ukuba wayebuyiselwe ngokugqithiseleyo, uMnu. Zelaya wayeya kumyeka
isakhelo sokhetho kwakhona. Zonke ezi ziphantse ziqinisekisa ixesha
umthetho ongekho mthethweni eHonduras - kunye nokuxhaphazwa okungapheliyo
imeko ngoMnu. Chávez, iqhawe elingenakwenzeka likaJeffersonian
idemokhrasi eLatin America.Alvaro Vargas Llosa ungumntu ophezulu
I-Independent Institute kunye nomhleli we "Izifundo ezivela koMpofu."
Alejandro Higareda R. uthi:
Mhlobo, ndikubhalela eMexico.
Ndize kwibhlog yakho ndikhangela ulwazi malunga neBitCad (andikwazi kufumana "FIND" umsebenzi ebendinawo kwi-Autocad) ndide ndiqwalasele iposi yakho yokugqibela ndafunda izinto ezininzi:
1.- Uhlala eHonduras.
I-2.- Uyingcali kwiCAD (okanye ubuncinane into enjani ukubonakalayo kum)
3.- Uyabazonda abapolitiki.
4.- Izwe lakho lidlula le kaKayin.
5. Uyasebenza, ungenzi ezopolitiko okanye "ugridi" (njengoko sitsho eMexico)
Kwaye ezinye izinto, kodwa ekubeni ndifanele ndize kusebenza ... ndithi kuwe:
Ndiyabulela ngokwabelana ngolwazi lwakho, usinceda uninzi ... Andiqondi kakuhle ukuba kwenzeka ntoni eHonduras, ngaphezu koko, ndiyazi kancinci malunga neHonduras (ndicinga ukuba akukho nto ... ndicela uxolo ...). Kodwa ndiyazi ukuba amaHonduran afuna oku okanye lo mlawuli okanye uhlobo lukarhulumente, nokuba yi-UN okanye i-USA okanye nabani na makangabahoyi. Ngapha koko Oko kuvakala ngathi yidemon emsulwa. Ukucoceka kwasekhohlo okushiyekileyo. Sonke siyayazi ukuba umongameli (ngakumbi iLatin American) akayidibanisi i-USA, uya kungenelwa "yiminqwazi eluhlaza okwesibhakabhaka," "iilwandle," okanye into enjalo.
Inhlanhla kwaye andiyazi ngendlela esinokukuxhasa ngayo kodwa uya kuthi.
Yiloo nto kwenye iposi endikuxelele ngayo malunga nokwenzeka eArgentina ngo-2001. Kwakuyinto efanayo naseHonduras; abantu bebengafuni ukuba uMongameli aphelise ixesha lakhe. Kodwa bakhathalele (bonke abezopolitiko) ukuba balandele amanyathelo "oMgaqo-siseko", oko kukuthi, iiNdlu zoWiso-mithetho zadibana, uMongameli wayeqinisekile ukuba ukurhoxa kuyeyona nto ingcono anokuyenza. Ngokukodwa emva kokuba ethumele amapolisa ukuba ayocokisa umboniso apho besweleke khona. Ngezo nyaniso, isagwetywa nanamhlanje ... Into yile yokuba ithiyori, amandla abantu adluliselwe, ngokweendlela zomgaqo-siseko ezinikezelweyo, komnye umntu ongonyulwanga ngokuthe ngqo ngabantu. Akukho mkhosi esitratweni. Ke kwabakho unyulo kunye nabahlobo bonke ...
Kucace gca ukuba emva koxinzelelo oothusayo obetha iLatin America, akukho thuba okanye sithuba sobundlobongela basemkhosini ukuba busetyenziswe. Ukusetyenziswa komkhosi yinto engamkelekanga namhlanje kangangokuba ne-United States ngokwayo-eyakhuthaza kwaye yaxhasa ukuba ingakanani into yokucinezelwa apho yayikhona e-Latin America ngaphambili - inomthetho ocacisa ngokucacileyo ukuba awuyi kumxhasa nawuphi na urhulumente ovela kumkhosi wokulwa . I-OAS iyafana, ngoko ke banyanzelisa ukuba uZelaya abuye kwaye alungise yonke into ngaphakathi. Nditsho ne-European Economic Community "ingxamile" kuba ngemithetho yabo abanakukwazi ukumbona umntu emva kwento eyenzekileyo eHonduras. Njengawo onke amanye amazwe aseLatin America aziveze ngala magama, njengeArgentina, iBrazil, iUruguay, iChile, iPeru, i-Ecuador, iVenezuela, iBolivia, njl. njl. (Ewe, ayingabahlobo nje baseVenezuela kunye nabahlobo bakaChávez, njengoko i-CNN isitsho, yonke iLatin America). Esususe umongameli kwikhaya lakhe emkhosini ngemikhosi yasemkhosini emva koko elizweni, wabangela ubunyani bayo nayiphi na ibango. Kwakuyimpazamo enkulu leyo kwaye kufuneka bayamkele kwaye batshintshe izigqibo abazenzileyo kuba uluntu lwamanye amazwe alunakwenza enye into ngaphandle kokuxhasa isikhundla esaziwayo. Sukuphathwa gadalala. Kukho "uMhlaba" ngokuchasene neHonduras. Oko kuyakujongela phantsi amandla okuqonda kunye nokulungelelanisa ilizwe lonke kunye nezigqeba. Kwaye okwam, andibajongeli phantsi abantu baseHonduran, njengoko i-CNN isenza, yenza ngathi umhlaba wonke ukholelwa ukuba yonke le ingcinga yeChávez, indlela yeChávez, iinjongo zeChávez, njl. njl. ngokungathi abantu baseHonduras babengenazo izimvo, iimvakalelo, iminqweno, iimfuno kunye neenjongo.
Ukuba ibango lokuba uZelaya aphela-kwiinyanga ezimbalwa ngaphambi- igunya lakhe lithandwa kwaye liyinyani, akuyi kuba nzima ukufumana isisombululo. Mhlawumbi isisombululo: ukubuyisela amandla nokuthetha-thethana ngenye indlela yokubonisana yokuhlaziywa komgaqo-siseko. Ngayiphi na imeko, uhlengahlengiso luya kubanceda abaviwa abanamaphiko. Kuya kufuneka bamkele uguquko kuMgaqo-siseko kodwa bongeze olunye uhlengahlengiso. Umzekelo, ngeenjongo zokubandakanya iindlela zoMgaqo-siseko ukunyanzelisa ukupheliswa kwegunya likamongameli kwabo benza ulwaphulo-mthetho okanye ukusebenzisa gwenxa amandla - ukumisela oko kunokuba "kukusetyenziswa gwenxa kwamandla." Yonke into inokubekwa umthetho. Ukuba iHonduras ayifuni ukuba ne "Chavez», abayi kuyifumana. Kuya kufuneka uyile ngakumbi…
Kwaye ngoku ndikuxelela e-[Argentina]: Misa ukubambeka kwezopolitiko wenze iposti malunga nedatha yokuphakama ye-ASTER egubungela umhlaba wonke-ubuncinci - isisombululo seemitha ezingama-30 !!!
I-hug kuyo yonke iHonduras ..
Ndiyabulela umhlobo wam uGerardo, andizange ndizikhalazele ngemibutho yamazwe ngamazwe.
Okungakumbi isikhalazo sam kukuba yonke le mbambano iyimpazamo yabezopolitiko, abanye ukuba bayenze, uninzi lokungayenzi. Ngoku sigwetyiwe kwihlabathi liphela ngomdla olungaphaya kwegama lentando yesininzi.
Ndiyazibuza ukuba i-UN iya kwenza ntoni kwimeko ebala kwaye yazi ukuba izikhundla ezivela kuzo zombini iziphelo "zilele kancinci" kwaye zilungile kakhulu, kwimbeko yokunyamezelana. Ngokusisiseko, sonke siyavumelana kunye neziphelo, kodwa iinkqubo zazo zombini zinemibuzo emininzi engaphendulwanga.
Ndabuyela uDon Alvarez ...
Ndandifuna ukufaka kwiimbono zam zangaphambili kwiimeko ezikhoyo kwiHonduras ukuba abantu ngabanye banelungelo lokukhetha nokwenza i-destiny abayifunayo. Ngoko ndikuqinisekisile ukuba, ngokomzekelo, ndicaphukiswa yizizathu zamamerica ezisetyenziselwa ukulinganisa ukuhlasela kwamazwe anjenge-Iraq, ukwenzela ukwenza ishishini.
Inyani yile yokuba into eyenzekileyo eHonduras ifanelwe luphononongo olunzulu kwaye lubanzi ngakumbi. Uya kube uzibuza ukuba yintoni ebalulekileyo kum ukuba kwenzeka ntoni kwilizwe lakho. Kodwa umba awenzeki apho. Ngexesha lokugqibela kugqwetha eArgentina, bendizibuza ndinxunguphele kwaye ndingenakukhathazeka, kutheni kungekho lizwe lide lahoya urhulumente de de facto yayibeka bodwa ukuze ithathe amandla. Kwaye ke ndicinga uninzi lwabantu bakho belizwe abavotela uZelaya. Baza kucinga ntoni. Kwaye ndicinga ngentloko engasemva yoqoqosho oluninzi oluncinci olunamandla kuqoqosho lwase Latin America kunye nendlela ekumele ukuba iyaphupha iphupha lokukwazi ukwenza into efanayo kumazwe abo. Uyakhalaza malunga neZinto. Ndiyakubuza: Ukuba unyanzelisa uMgwebi woLuntu kwaye ufumanise malunga nolwaphulo-mthetho. Nangona kungekho mntu uyixelileyo. Ufumanisa ngaye. Wenza ntoni? Ewe, kuya kufuneka wenze "iOfisi". Kuba wena ungumgwebi. Unoxanduva lokuthatha amacala. Awunakujonga ngenye indlela. Yintoni eyenzekileyo eHonduras, inyanzela iiarhente ukuba zikhutshwe. Azikho ezinye iindlela. Kwaye qikelela ukuba yeyiphi inqanaba ekufuneka BAYithathe?
Wonke umntu uyakholelwa koko bafuna ukukukholelwa, akunjalo? Ndiyakumema ukuba uthathe iveni yakho kwaye uye kubona ibhulorho emantla edolophu. Thatha imifanekiso yekhefu lakho. Ndiqinisekile ukuba ngamehlo akho obuchwephesha be-cadastral uya kuba nakho ukubona ukuba kuqhekezwa umkhukula (apho kufanele ukuba kube namanqaku amaninzi) okanye kuqhushulwe iziqhushumbo ngumkhosi. Ungakholelwa ukuba "ngaphandle" asinawo umbono wento eyenzekayo. Mhlawumbi umfundi oselula waseSpain usenokungabi nalo "uluvo" lwento eyenzekayo kwilizwe lakho. Kodwa abantu baseLatin America abazaziyo iindlela ezincinci zokugcina amandla, siyayazi ukuba kwenzeka ntoni. Ngumbandela wokuziva ngeAlvarez. Wena ngokwakho uyibonile kwisithuba sokuqala. Awungekhe uqhubeke nokuphila ngetyala ekuhlaleni. Lowo uyifihlayo inyaniso uyazi ukuba uphosakele.
Siyabonga ngokuthumela zonke iimbono zam. Emva koko, ibhulogi yakho ...